नेपालमा कोरोनाको भार सरकारी स्वस्थ्य क्षेत्रलाई मात्र किन? निजि स्वास्थ्य क्षेत्र किन पन्छिदै - firewordsdaily
नेपालमा कोरोनाको भार सरकारी स्वस्थ्य क्षेत्रलाई मात्र किन? निजि स्वास्थ्य क्षेत्र किन पन्छिदै
कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता: टूडेज भोईस (Todays Voice)
अहिले विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको उक्त भाइरसले भौगोलिक सीमालाई पार गरेर युरोप, अमेरिका, अफ्रिकादेखि विश्वका सबैजसो मुलुकमा असर गरिसकेको छ। भाइरस फैलिने गति अझै पनि निकै निरन्तर र तीब्र छ यस कारण कतिपय देशमा लकडाउन छ।
चलायमान विश्व अहिले ठप्प जस्तै बनेको छ। भाइरसको उपचार पत्ता लागिनसकेका कारण यसलाई छिट्टै रोक्न सकिएको छैन। यो विश्वकै लागि आणविक हतियारभन्दा खतरनाक र भयानक बनेको छ अहिले।
चीनले भने बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको अवस्था छ तर अमेरिका र युरोपका सम्पन्न मुलुकले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न कठिन भएको छ। बेलैमा सावधानी नअपनाउँदाको परिणाम अहिले युरोपका देश र अमेरिकाले भोगिरहेको अवस्था छ। हामीकहाँ पनि केही समयअघि देखि अहिले सम्म पनि लकडाउन नै छ तर मानिस हरु भने पहिला जस्तै अवस्थामा फर्की सकेका छन्। यद्यपि परिक्षणको दायरा अझै सम्म पनि सुस्तै छ। परिक्षणको दायरा सुस्त हुनुको कारण सरकार अन्य निकाय वा नागरिकलाई थाहा नभएको भने पक्कै होइन। परिक्षणको दायरा बढाउनु हाम्रो जस्तो गरिब देशको लागि चुनौती कुरा भने अवश्य हो। तर नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्र तेति कम्जोर भने होइन जति अहिले कोरोना परिक्षणका गतिमा देखिएको छ।
कोरोना अघि नेपालि स्वास्थ्य क्षेत्रको भार सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रले भन्दा निजि स्वास्थ्य क्षेत्रले बढी बोकेको थियो। तर अहिले नेपालमा कोरोना भित्रिएसंगै कोरोनाको भार सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रले मात्रै बोक्दै आएको छ। निजि स्वस्थ्य क्षेत्र यस बाट पन्छिएका छ्न नत सरकारले नै निजि स्वास्थ्य क्षेत्र लाई कोरोनाको भार बोकाएको छ। तर यसरी एकलै भार बोक्न सक्षम सरकारी स्वस्थ्य क्षेत्र होइन र थिएन। निजि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई किन कोरोनाको भार बोकाइदै छैन किन सरकारी क्षेत्रले मात्रै बोक्दै छ। नेपाल बाहिरका कयौं देशमा कोरोनाको भार बोक्न निजि स्वस्थ्य क्षेत्रलाई सम्बन्धित देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरु टेलिभिजन मै आएर सहयोग मागेका वा अनुरोध गरेका दृश्यहरु प्रस्सतै देखिन्छ। तर नेपालमा भने निजि स्वस्थ्य क्षेत्र संग सहयोगको विषयमा सरकार पक्ष नत बोलेको देखिन्छ नत पहल गरेकै। नेपालमा परिक्षणको दायरा बढाउन कोरोना रहित हुन कोरोनाको भार निजि स्वस्थ्य क्षेत्रलाई पनि दिनु पर्दछ।